KU SAABSAN US - Qadaadiic iyo musaamiirtooda Co., Ltd.
Aasaasidda 2004, waxaa naloo laftiisa daahirinta si ay u bixiyaan tiro balaadhan oo hadiyado si ay macaamiisheeda. isagoo musmaarradii lapel xirfadeed, lacagta birta ah biraha, keychains, suuman, warshad cufflinks muddo ka badan 15 sano, our mission waa in la siiyo wax soo saarka ugu qiimaha badan macaamiishayada, ma aha oo kaliya on qiimaha laakiin sidoo kale tayada.
Waxaan ka fiirsan oo tayo leh sida mudnaanta koowaad, alaabta oo dhan waa la gudbey talaabo talaabo our tayada adag gudahood.
amarada Dhammaan macaamiisha 'yihiin ma aha oo kaliya u xaqiijiyay tayo leh laakiin sidoo kale aad u ammaan ah.
waaxda Our tayada waa xoog, ay u suurtagashay in ay kormeeraan tallaabo kasta oo nidaamka oo dhan si ay u hubiyaan tayada iyo sidoo kale tirada.
Ku hamiday ah oo ku saabsan waxa aynu qabanayno, shaqaalaha ayaa doonaya inay ku siiso si ay hawsha ugu fiican macaamiisha! Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin dad iibka in ay ka shaqeeyaan habeen iyo maalin toona si loo hubiyo in macaamiisha meel kala duwan ka heli karto jawaab deg deg ah haddii loo baahan yahay sheegyada.
hadda nala soo xiriir si aad u bilowdo!
No.1222 Road Nijiabang Zhoushi Town, Kunshan City, Shiinaha